Bilaogy Sy Labiera Miaraka Amin’i David De Ugarte · Global Voices teny Malagasy
Bilaogy Sy Labiera Miaraka Amin'i David De Ugarte
Voadika ny 28 Oktobra 2017 3:48 GMT
(Marihina fa tamin'ny 13 Novambra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nitsidika an'i Shily i David De Ugarte, bilaogera malaza iray ao amin'ny tontolon'ny bilaogy teny Espaniola. Izy no mpanorina ny Las Indias Electrónicas (ES) sady mpamorona ny Cyberpunk (ES). Alina vitsy lasa izay, nizara fotoana niaraka tamin'ireo bilaogera Shiliana tamin'ny fanasana malalaka i David, mba hahafahan'ny rehetra manatrika izany.
Namoaka ny heviny i Roberto (ES) :
Anoche, casi 3 años después, tuve la oportunidad de hablar con él, de conversar, de escuchar su terrible relato del 11M en Madrid, de conocer sus planes y llenarme de ganas de acompañarlo en sus aventuras de Las Indias Electrónicas. Es que este español, tan viajado y aventurero, impulsor de muchos proyectos en la red y ciberactivista de excepción, se las trae”
Halina, efa ho telo taona taty aoriana, afaka niresaka taminy aho, naheno ny tantarany mampihoron-koditra momba ny baomba nataon'ireo mpampihorohoro tao Madrid, mahafantatra ny tetikasany ary nanaraka azy tamin'ny zavatra niainany tamin'ny Las Indias Electrónicas . Nanao dia maro ity Espaniola mpifindrafindra monina ity ary nanatontosa tetikasa marobe tao amin'ny tranonkala sady mpikatroka antserasera miavaka .
Notohizan'i Roberto tamin'ny “tononkalo” sy ny “tantara” izany. Nanazava taminay i David fa afaka manangana izao tontolo izao ny tononkalo ary matetika manohitra zavatra iray hatrany ny tantara, ka manjavona izany rehefa tratra ny tanjona. Tena mampifandray ny olona ny aterineto sady mahatonga fifampikasohana tsara amin'ny fomban'ny tononkalo – ary mankahery ny olona izany, ampiarahana amin'ny fanavaozana.
Nanoratra i Beatriz (ES) fa namela antsika hisaintsaina ny resadresaka niarahana tamin'ny hafa ary nahita hevitra iray izy noho ity fihaonana ity, efa nanana tsirinkevitra sahady: arteCo. Izany dia famoronana asakanto iombonana mahakasika ny rehetra. Mila manana efamira kely mirefy 20 X20 sm fotsiny ny olona iray. Ny hanangana lamba firakotra virtoaly amin'izany no atao. (Azonao atao ny mijery ny angon-tsary natambatambatra miisa 40 mahery izay efa voarain'i Beatriz.)